Exchange Union စျေး - အွန်လိုင်း XUC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Exchange Union (XUC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Exchange Union (XUC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Exchange Union ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Exchange Union တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Exchange Union များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Exchange UnionXUC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.08Exchange UnionXUC သို့ ယူရိုEUR€0.915Exchange UnionXUC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.826Exchange UnionXUC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.984Exchange UnionXUC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr9.73Exchange UnionXUC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.81Exchange UnionXUC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč24.06Exchange UnionXUC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.04Exchange UnionXUC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.44Exchange UnionXUC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.51Exchange UnionXUC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$24.13Exchange UnionXUC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$8.35Exchange UnionXUC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.86Exchange UnionXUC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹80.86Exchange UnionXUC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.182.03Exchange UnionXUC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.48Exchange UnionXUC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.63Exchange UnionXUC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿33.65Exchange UnionXUC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥7.51Exchange UnionXUC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥114.18Exchange UnionXUC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1281.71Exchange UnionXUC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦416.96Exchange UnionXUC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽79.45Exchange UnionXUC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴29.88
Exchange UnionXUC သို့ BitcoinBTC0.00009 Exchange UnionXUC သို့ EthereumETH0.00274 Exchange UnionXUC သို့ LitecoinLTC0.0187 Exchange UnionXUC သို့ DigitalCashDASH0.0111 Exchange UnionXUC သို့ MoneroXMR0.0116 Exchange UnionXUC သို့ NxtNXT75.58 Exchange UnionXUC သို့ Ethereum ClassicETC0.155 Exchange UnionXUC သို့ DogecoinDOGE307.34 Exchange UnionXUC သို့ ZCashZEC0.0114 Exchange UnionXUC သို့ BitsharesBTS41.53 Exchange UnionXUC သို့ DigiByteDGB36.88 Exchange UnionXUC သို့ RippleXRP3.67 Exchange UnionXUC သို့ BitcoinDarkBTCD0.0367 Exchange UnionXUC သို့ PeerCoinPPC3.6 Exchange UnionXUC သို့ CraigsCoinCRAIG485.28 Exchange UnionXUC သို့ BitstakeXBS45.42 Exchange UnionXUC သို့ PayCoinXPY18.59 Exchange UnionXUC သို့ ProsperCoinPRC133.63 Exchange UnionXUC သို့ YbCoinYBC0.000572 Exchange UnionXUC သို့ DarkKushDANK341.49 Exchange UnionXUC သို့ GiveCoinGIVE2305.09 Exchange UnionXUC သို့ KoboCoinKOBO239.07 Exchange UnionXUC သို့ DarkTokenDT0.993 Exchange UnionXUC သို့ CETUS CoinCETI3073.4